Ungazinxiba njani iiJean eziQhoboshelwe - Isinxibo Sabafazi Casual Casual
Ungazinxiba njani iiJean eziQhoboshelwe
Iimpawu eziNinzi zeFashoni
Ngaba uyazibuza ukuba unxiba njani ijean? Ijee ezixineneyo yindlela elula yokwenza ukuba ubonakale unesitayile ngaphandle komzamo omkhulu. Ngee-cuffs, ungatshintsha indlela i-jean endala ejongeke ngokupheleleyo, kwaye ngaphandle kwendleko kuwe.
Iindlela eziNtandathu zokuNxiba iiJean eziQhoboshelwe
Ikhofu yeebhulukhwe yeebhulukhwe isisongelo esityikityiweyo emazantsi omlenze webhulukhwe. Inokubanzi okanye ibe yincinci, kuxhomekeke kwimikhwa okanye ukhetho. Zama ezi ndlela ukongeza ubomi kwiidinim ezidiniweyo.
Imifanekiso emfutshane enxibe ihlobo
Iingubo ezincinci zeMicro
Imifanekiso yeGadi yasebusuku
1. I-Ankle-Baring Cuff eneeflethi
Ngombini omncinci weean kunye neeflethi, uyakufumana ipenti yesiqhelo ekhonkxiwe itad ekhathazayo. Endaweni yoko, nxiba iijean zakho ozibophileyo ngaphezulu kweqatha kunye neebhanti zokuqhuba okanye izihlangu ezilinganayo ezifanayo. Oku kujongeka kumangalisa ngexesha leenyanga ezibandayo xa ubhangqiwe kunye nezihlangu zakho ozithandayo! Uya kuyithanda inkangeleko!
Iqatha leBaring Cuff
2. Ulusu Cuff
Kwikhofu engakhankanywanga kangako, khetha ikhetshana elibhityileyo. Ukwenza oku kujongeka, pheka ijean yakho kancinci nje kuluhlu oluncinci lwecuff. Ungazama oku nge-jean ye-indigo emnyama, eya kwenza ukubonakala kungabonakali kangako, kwaye emva koko uphumelele kwi-jean elula.
3. 'Ungakhathali' Cuff
Songa iijini zakho kube kanye kuphela ukubonisa isisele (isiphelo sendwangu esigqibeleleyo) kwaye ushiye kuloo nto. Khetha owona mgangatho uphakamileyo wokuphakama kwezihlangu zakho ozikhethileyo - izithende zinokufumana okuphezulu okuphezulu, ukubopha iqatha, okanye ukuphakama okuphakathi okuqaqambisa isithende ngaphantsi.
4. UMyili Cuff
Cuff ijee yakho xa benomthungo okhethekileyo abagqibayo ngaphakathi ukubonisa iinkcukacha zelebhile yabo eyinkulumbuso. Oku kunokubandakanya ukuthungwa kwesiFrentshi, ukujija ngombala, okanye ukunyathela ngaphakathi.
5. Ubusuku 'ngaphandle edolophini' Cuff
Ukujongwa kwe-denim ekhonkxiweyo, qalisa ngeebhulukhwe zeebhonyile kwaye uzikhuphe ngendlela othanda ngayo, uzimatanise ngobuchule neempompo zakho ozithandayo- okanye iidges ngexesha lasehlotyeni! Oku kuhle ngobusuku edolophini!
'Ubusuku ngaphandle kwedolophu' Cuff
6. Slouchy cuffed Jonga
Ngaba uqaphele ukuba i-denim ekrazuliweyo kunye ne-slashed enemingxunya emikhulu -kwinjongo- iya isanda ngokuya ithandwa ngakumbi? Ukujonga okungaqhelekanga, qala ngesibini osithandayo sedenim esitshatyalalisiweyo kwaye uziqengqe amaxesha ambalwa ezantsi, ubhangqe nezihlangu zakho ozithandayo zesitayile sonyaka!
Slouchy cuffed Jonga
Iimpazamo ezintathu zokuCuffing kufuneka uziphephe
Ngamanye amaxesha, iijee ezixineneyo zinokuhamba kakubi. Nazi iimbonakalo ezimbalwa ezingazukusebenza kakuhle.
1. Ukudibanisa neZicathulo eziXineneyo
Iikhofu ezibanzi zikhangeleka zibi xa zidityaniswe nezihlangu ezinje nge-t-straps, espadrilles, okanye uMary Janes, kunye nezo zithende zine-beading okanye uthunge oluninzi.
2. Ukuphawula imitya ngaphezu kweCuffs
Kulumkele ukunxiba iimbadada ezomeleleyo ngaphezulu kweekhafu zedenim yakho. Le nkangeleko ayiqhelekanga kwaye inobudenge. Endaweni yoko, gcina iimbadada zakho ezinqabileyo ezimfutshane, izikethi okanye-ukuba kufuneka uzidibanise neebhulukhwe- uCapris.
3. UkuQinisa kwakhona
Sukuphinda uyikhuphe kwakhona ijee yakho esele ikhutshiwe, kuba oku kuya kukhokelela kwinkangeleko enkulu kakhulu. Ukuba zide kakhulu, kwaye uzithengele ii-cuffs, ungazizisa kumthungi ukuze zilungiswe. Umthungi uya kuba nakho ukwahlula isahlulo esisezantsi aze asiphinde asidibanise nesishunqulelwe ijean.
Iingcebiso zokufezekisa iCuff egqibeleleyo
Ngaba usakhangela ezinye iingcebiso zokucofa? Nako sisiya!
Cuff ijean skinnier ene-roll-cuff enye yokugcina i-silhouette ecekeceke.
Zama ii-cuffs ezibanzi kwijini ngejongeka encinci ye-bootcut- benza i-capris enkulu ngeembadada zembadada.
Intsimbi iicuffs zakho emva kokuba uthathe isigqibo sokuba ukubekwa kweliphi na ibhetri kuyeyona ilungileyo.
Uvavanyo lweekhofu ezinqinileyo xa unxibe ijean yesoka kunye nezithende.
Ukuba uyayithanda inkangeleko yeejean ezixhonyiweyo, thenga izitayile zangaphambi kokuqhobosha ezihamba nokuzikhathaza ngokuzama ubukhulu bekhofu kunye neziphumo.
Faka iiZakhono zakho zokuCuffing
Ngoku ukuba uyayazi indlela yokunxiba iijee ezifakwe ii-cuffed, yiya phambili kwaye ufumane ii-cuffing. Uyakwazi ukuphuma ngesitayile, ufumane ukubonwa okuninzi kwisibini esinye sejee.
Yinyani Ukubhala I-Nail Care Nokuyilwa Kweempawu Ukuhombisa Inkcubeko Yesifrentshi Imihla Yokuqala
ubunzima bephepha le-drywall
ucoca njani umdlali we-cd yemoto
kanye njengokuba umntu ezuza njengelifa iimpawu zomzimba
ixabisa malini ipeni yaseMelika eMelika
ngekati xa uneminyaka emingaphi
uyifumana njani ihedgehog yesilwanyana sasekhaya
umbala weenwele wabasetyhini ngaphezulu kwe-60